यस्तो छ साताको शेयर बजार : कुन कम्पनीको कति कारोवार ? - Deshko News Deshko News यस्तो छ साताको शेयर बजार : कुन कम्पनीको कति कारोवार ? - Deshko News
यस्तो छ साताको शेयर बजार : कुन कम्पनीको कति कारोवार ?
सो दिन १५४ कम्पनीको सात लाख ५१ हजार ४११ कित्ता शेयर रु २५ करोड ७६ लाख सात हजार १६६ मूल्यमा खरीद बिक्री भएको थियो । साताको अन्तिम दिन बिहीबार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक एक दशमलव ५६ बिन्दुले घटेर एक हजार १७८ दशमलव ८७ बिन्दुमा झ¥यो ।